Warbixinta Guddida Dhaqaalaha ee Miisaaniyadda: Waxay soo jeediyeen in duuduub lagu ansixiyo | Somaliland.Org
May 28, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Guddida Dhaqaalaha ee Golaha Wakiillada ayaa shalay golaha hortiisa ka jeediyey warbixin la xidhiidha odoroska Miisaaniyadda Dowladda ee 2008 oo golaha hortaalla, kadib markii xukuumaddu dib ugala dhacday wakhtigii sharci ahaan golaha la horkeeni lahaa.
Guddida Dhaqaaluhu waxay warbixintan keeneen kadib kulan dheer oo ay la yeesheen Wasiirka maalmihii la soo dhaafay, kaas oo ay ka wadahadlayeen arrimaha miisaaniyadda ee muranka badan ka dhex abuuray xukuumadda iyo Golaha Wakiillada. Waxayna warbixintooda ku soo jeediyeen in aan wax ka beddel lagu samayn miisaaniyadda, sideedana lagu ansixiyo, taas oo la sheegay in xubnaha guddidu ay ku kala qaybsameen, balse, ay ku taag roonaadeen xubnaha doonayey in sideeda loo siidaayo miisaaniyadda.
Warbixintaas oo uu golaha hortiisa ka akhriyey Guddoomiyaha Guddida Dhaqaalaha, mudane Maxamed X. Maxamuud Cumar-xaashi, iyada oo faahfaahsan waxay u qoran tahay sidan:
“Odoroska miisaaniyadda 2008 waxa loo soo gudbiyey Guddida Dhaqaalaha 6/5/2008, si guddidu warbixin faahfaahsan uga diyaariso, kadibna ugu gudbiso Golaha Wakiillada si ay uga doodaan, loona ansixiyo sida ku cad qodobadda Dastuurka 53 iyo 55.
Haddaba, Guddida Dhaqaalahu si ay u hesho macluumaadka dhabta ah ee dakhliga dalka wuxuu go’aansaday doorkan inay kulanno is-dabajoog ah la yeeshaan wasaaradaha iyo hay’adaha dhaqaalaha, iyagoo safarradii ilaha dhaqaalaha uga maarmay waqti yaraan awgeed.
Haddaba, waxay Guddida Dhaqaalahu la kulantay:
Wasaaradda Duulista hawada iyo Cirka.
1. Wasaaradda Maaliyadda
Waxa Guddida dhaqaalaha u suurta gashay inay dood dheer iyo falanqayn la yeeshaan madaxda Wasaaradda Maaliyadda oo uu hoggaaminayey Wasiirka Maaliyadda Mudane Xuseen Cali Ducaale. Waxay warbixin naga siiyeen hawlaha dhinacooda iyo qaabka miisaaniyaddu sannadkan u dhigan tahay.
Haddaba waxa kulankan nooga soo baxay:
Guddida Dhaqaalaha iyo madaxda wasaaraddu way ku kala aragti duwanaadeen sida laga yeelayo miisaaniyaddi 2007 iyo qaabkii loo macnayn lahaa sababihii keenay dhaqan gelin la’aantii miisaaniyadda, waxana la isla gartay in loo gudbo imminka ka hadalka miisaaniyadda sannadkan 2008.
Labada dhinac waxay isla garteen inaan tacriifad Golaha Wakiillada laga ansixin marna lagu dhaqmi karin.
In laga wada shaqeeyo sidii loo dhaqan gelin lahaa xeerka miisaaniyadda oo hore Golaha Wakiillada looga dooday. Isla markaana la qabto ”Workshop” kale oo ay wasaaradda Maaliyaddu ka soo qayb gasho.
In Miisaaniyadda sannadka soo socda 2009 lagu soo qoro dhammaan lacagaha ay siiyaan hay’adaha UN-ta ama kuwa dawliga ah wasaaradaha xukuumadda. Lacagtaas oo lagu soo qoraayo deeq ama ”grant” si loo arko xaddiga lacagta wasaarad kasta loogu deeqay.
2. Wasaaradda Duulista Hawada iyo Cirka
Kulankan oo ahaa kii labaad ayaa waxa dhinaca Wasaaradda Duulista iyo Cirka hoggaaminayey Wasaiirka Wasaaradda Mudane Cali Maxamed Waranacadde.
Kulankan waxa lagu gorfeeyey ilaha dakhliga wasaaraddan ee ay ku soo kordhiso dalka iyo tallaabooyinka ay qaaday sidii dakhligaa loo kobcin lahaa. Waxaa kale oo laga wada hadlay barnaamijyada horumarineed ee u qorshaysay wasaaradda duulista hawada.
Waxa ka soo baxay kulankan:
1. Waxa Wasiirka Mudane Warancadde noo caddeeyey inuu dhisaayo Garoonkii diyaaradaha ee Berbera si ay u noqoto meel u dhiganta garoonada adduunka. Isla markaana uu ku kordhin doono dhisme cusub oo wada leh qaboojiyaal.
2. Waxa uu sidoo kale ku ballaanqaaday inuu hinayo waddada ay ka haadaan diyaaraduhu ee Madaarka Hargeisa ee Egal International Airport si ay u soo fadhiisan karaan diyaaradaha Jet-ka.
3. Waxa kale oo uu wasiirku ka warbixiyey hay’adda ICAO uu iyadu qaadda lacagta diyaaradaha hawada dalkeenna. Kulanno is-daba-joog ahaa iyo muranno badan oo soo kala dhexgalay wasaaradda iyo ICAO, ayaa ugu dambayntii waxa uu wasiirku caddeeyey inay meel u fiican u marayso inay heshiis wada gaadhaan ku saabsan sidii ay lacagtaas dalkan Somaliland ugu soo noqon lahayd.
4. Waxa labada dhinac ee wasaaradda iyo Guddidu isla garteen in lacagta $2 (labo doollar) ee ay wasaaraddu ku qaaddo Madaarka Hargeisa ay noqoto mid aan khasab ahayn, isla markaana lagu qoro boodhadh waaweyn oo muujinaya in aanay khasab ahayn. Waxana wasiirkii na huga-tusaaleeyey waxyaabaha faa’iidada ah ee ku qabtaan lacagtaas yar ee ay qaadaan.
5. Dekedda Berbera:
Kulankan oo ay ka soo qaybgaleen madaxda Dekedda Berbera oo uu hoggaaminayo
Maareeyaha Dekedda Eng. Cali Xoorxoor. Dood dheer iyo falanqayn, waxa uu maareeyuhu ka sheekeeyey marxaladihii kala geddisnaa ee ay soo martay dekeddu iyo halka ay maanta ku sugan tahay, waxana kulankaa ka soo baxay:
1. In dhammaan cashuuraha dekedda ay la wareegeen Wasaaradda Maaliyaddu oo aanay wax cashuur ah qaadin. Waxa keliya ee qaadaan tahay lacagta addeegga dekedda (service charges).
2. In dekeddu leedahay xeer lagu maamulo oo soo baxay 1993, kana soo baxay Golaha Wakiillada ee JSL. Xeerkaas oo ay illaa hadda isku maamulaan.
3. In dekedda dhinaceeda koonfur Galbeed ku soo dhacaan dabaylo wata ciid, kuwaas oo khatar ku haya dekedda, isla markaana ka soo buuxiyey ciid biyaha badda oo mustaqbalka dhow khatar gelin kara adeegga dekedda. Sidaa darteed, dekeddu imminka ka shaqaynayso sidii ay u soo iibsan lahayd qalabka xaaqa ciidda.
4. In shaqaalaha dekedda ay saamayn ku yeellatay ascaarta cuntada ee kor u kacday. Dabeedna, deked ahaan ay u qorshaysan tahay inay 50% ku kordhiyaan mushahaarka shaqaalaha ka hawlgala dekedda.
5. In cashuurta laga qaado cuntooyinka halkii metric ton oo la qaadan jiray $2 laga dhigay imminka $2.5, si loo daboolo sicir-bararka ku yimi dhammaan alaabta ay adeegsato dekeddu sida batroolka, qalabka dayactirka iyo mishiinnada dekedda.
6. Markaas dood dheer kadib waxa la isla gartay in cashuur adeeg aan la kordhin karin iyadoon la soo marin Golaha Wakiillada.
Fikirka iyo Astaamaha Miisaaniyadda sannadka 2008
(Budget policy analysis):
Misaaniyadda sannadkan 2008 oo dhan 300,252,463,142 SLSH, marka lagu daro miisaaniyadda u gaarka ah doorashooyinka iyo diinwaan gelinta codbixiyaasha sannadkan 2008 oo dhan 5,000,000,000/ iyo Miisaaniyadda u gaarka ah dekedda Berbera oo dhan 19,642,381,221 SLSH.
1. Dawladda Dhexe 300,252,463,142 SLSH
3. Dekedda Berbera 19,642,381,221 SLSH.
Isugeyn: 300,252,463,142 SLSH
Miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay dakhli iyo kharash isleeg. Waxayna ka badan tahay miisaaniyaddii sannadkii hore 2007 lacag dhan (280,610,081,921 – 202 759 848 704) 77,850,233,217 SL.SH oo u dhiganta korodh dhan 27,74%.
Miisaaniyadda sannadkan 2008 sidii kuwii hore wasaaraddu may soo bandhigin siyaasadda xukuumadda ee sannad-maaliyadeedkan. Waxa ku cad lacagaha loo qoondeeyey wasaaradaha iyo hay’adaha dalka iyo lacagta loo qoondeeyey doorashooyinka iyo diinwaan gelinta.
Waa markii ugu horraysay ee miisaaniyadda loo sameeyo jaantus muujinaya qaybaha kharashka ee miisaaniyadda sannadkan 2008.
Haddaba, waxa ku cad jaatuskan in lacagta ugu badan ee miisaaniyaddan 2008 loo qoondeeyey dhinaca nabadgelyada 51.64% sidii kuwii sannadihii hore. Sidaa darteed, waxa la odhan karaa waa miisaanayad nabadgelyo oo malaha siyaasad kale oo laga duulayo, waana sidan:
S/NO Qaybaha (Sectors) Qoondayn
(Amount allocated) Saamiga
1. Adeegga Bulshada
(Social Service Sector) 32,862,492,937 (11.71%)
2. Dhaqaalaha iyo Wax soo saarka
(Economy and Productivity) 30,109,513,204 (10.73%)
3. Nabadgelyada iyo Caddaaladda
(Security and Judiciary) 144,904,001,353 (51,64%)
4. Maamulka iyo Siyaasadda
(Administration and Political Leadership) 57,154,682,048 (20.37)
5. Horumarinta iyo Mashaariicda
(Development and Projects) 15,579,392,379 (5.55%)
Isugeyn (Total) 280,610,081,921 100%
Waxa keliya ee laga garan karaa jaantuska sare haddii aad loo dhugto miisaaniyadda 2008 in lacagta ugu badan loo qoondeeyey dhinaca nabadgelyada, taas oo dhan 51.6% (waxay ka yar tahay tahay 1.8% sannadkii hore 2007 oo ahayd 53,4 %). Waxayna kala yihiin ciidammada qaranka 30.52% oo ka badan tii sannadkii hore 4.52%, ciidamada boliiska 11.37 %, oo ka badan tii sannadkii hore 0.37%, ciidammada asluubta 4.74% oo ka yar tii sannadkii hore 1.26 % iyo ciidammada illaalada xeebaha 0.79% oo ka yar tii sannadkii hore 0.21 % iyo wasaaradaha gaashaandhigga 4.22% oo ka yar tii sannadkii hore 1.18%. Kharashka loo qoondeeyey qaybaha ciidammada qaranka iyo Wasaaradda Gaanshaandhigga ayaa isku noqonaya 144,904,001,353 SL.SH oo dhan 51,6%
Golayaasha Qaranka oo ka kooban Maxkamadaha (Judiciary), Xeer-dejinta (legislation) iyo Xukuumadda (Executive) ayaa looga dheegan karaa miisaaniyadda sannadkan 2008.
Dhinaca caddaaladda iyo maxkamadaha ayaa waxa kuu soo baxaya sidan:
Maxkamadaha (Maxkamadda Sare 0,44%, Maxkamadaha hoose 1,26 %, Wasaaradda caddaaladda 0,36 % iyo Xeer-ilaalinta Guud 0,32 %) ayaa iyana waxa lacagta loo qoondeeyey dhan tahay 6,665,056,439 oo noqonaysa 2.38%.
Labada Gole ee Xeer-dejinta ee kala ah Golaha Wakiillada oo loo qoondeeyey 5,756,400,400 SL.SH oo u dhiganta 2.05% oo ka yar tii sannadkii hore 0.85% iyo Golaha Guurtida oo loo qoondeeyey lacag dhan 6,003,200,400 SLSH oo u dhiganta 2.14% oo ka yar tii sannadkii hore 0.96%.
Haddaba, Xeer-dejintu waxaa loo wada qoondeeyey miisaaniyadda sannadka 4.19%. Xukuumadda oo ka kooban Qasriga Madaxtooyada oo loo qoondeeyey 2,600,419,200 SLSH oo u dhiganta 0.93% oo ka yar tii sannadkii hore 0.4%, Madaxweyne-ku-xigeenka oo loo qoondeeyey 0.41% oo ka yar tii sannadkii hore 0.19% iyo Wasaaradda Madaxtooyada oo loo qoondeeyey 6.52% oo ka badan tii sannadkii hore 0.02%. Qaybaha madaxtooyda waxa isugeyn loo qoondeeyey lacag dhan 22,055,855,622 SLSH oo ah 7.86%
Garsoorka Xeer-dejinta Fulinta
2.38% Golaha Wakiillada 2.05% 7.86%
Golaha Guurtida 2.14%
Wasaaradaha u adeega Bulshada:
Haddaba, wasaaradaha u adeega bulshada oo ahmiyad weyn ugu fadhiya bulshada reer Somaliland sida Wasaaradda Waxbarashada ayaa loo qoondeeyey lacag dhan 13,263,048,833 SLSH oo u dhiganta 4.7% oo ka yar tii sannadkii hore 0.8% iyo Wasaaradda Caafimaadka oo laga jebiyey qaybta shaqada (labour-ka) ayaa isku heshay lacaga dhan 8,371,269,520 SLSH oo u dhiganta 2.98% oo ka yar tii sannadkii hore 0.32%, ayaa misaaniyadoodu aad u hoosaysaa sidii sannadkii hore, loona baahan yahay in la kordhiyo miisaaniyadooda si bulshada loogu adeego.
Wasaaradda duulista Hawada ayaa loo qoondeeyey 2,540,568,154 SLSH oo u dhiganta 0.91%. Wasaaradda arrimaha Gudaha ayaa loo qoondeeyey 12,065,040,386 SLSH oo u dhiganta 4.3% oo ka badan tii sannadkii hore 0.7%.
Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ayaa loo qoondeeyey lacag dhan 875,278,000 SLSH oo u dhiganta 0.31%,
Wasaaradaha wax-soo-saarka iyo Kobcinta dhaqaalaha dalka:
Waxa sidoo kale aad u liita wasaaradaha wax soo saara ee loo baahnaa in khayraadka dhulkeena ku jira wax badan ka qabtaan oo horumariyaan sida Wasaaradda Beeraha ayaa loo qoondeeyey lacag dhan 1,649,809,600 SLSH oo u dhiganta 0.59% oo ka badan tii sannadkii hore 0.05% . Wasaaradda Kalluumaysiga oo loo qoondeeyey lacag dhan 2,158,776,800 SLSH oo u dhiganta 0.77% oo ka badan tii sannadkii hore 0.29%. Wasaaradda Macdanta iyo biyaha oo loo qoondeeyey lacag dhan 1,059,182,800 SLSH oo u dhiganta 0.38% oo hoos u dhacday mar kale sidii sannadkii hore 0.05%.
Waxa kale oo iyana wax yar lagu celiyey dadka reer guuraaga ah oo lafdhabar u ah dhaqaalaha dalka Somaliland, dad badanina ku nool yihiin. Waxaana loo qoondeeyey tusaale ahaan sida Wasaaradda Xannaanada Xoolaha oo loo qoondeeyey 1,659,809,600 SLSH oo u dhiganta 0,59 % oo sannadkan kor u kacday 0.03% iyo Wasaaradda Horumarinta Reer miyiga oo loo qoondeeyey 1,404,418,896 SLSH oo u dhiganta 0.50%, korna u kacday 0,26 %.
Wasaaradda Wershedaha oo loo qoondeeyey lacag dhan 982,668,000 SLSH oo u dhiganta 0.35%.
Dhallinyarada iyo Wacyigelinta dadweynaha:
Wasaaradda keliya ee dhinaca dhallinyarada oo ah Wasaaradda Dhallinyarada iyo Cayaaraha ayaa loo qoondeyey lacag dhan 1.147,727,600 SLSH oo u dhiganta 0.41%. Waxaa kale oo loo qoondeyey Wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo TV-ga qaranka lacag dhan 4,953,513,168 SLSH oo u dhiganta 1.77%.
Waxa kale oo Wasaaradda Maaliyadda loo qoondeeyey lacag dhan 16,398,417,564 SLSH oo u dhiganta 5,84% oo ka yar tii sannadkii hore 2.36%, iyo Wasaaradda Hawlaha Guud ayaa loo qorsheeyey lacag dhan 5,165,203,786 SLSH oo u dhiganta 1.84%.
Haddaba waxa innooga soo baxay halkan in wasaaradaha lacagta ugu badan loo qoodeeyey iyo kuwa lacagta ugu yar loo qoondeeyey ay kala yihiin sidatan:
S/NO Wasaaradaha loo qoondeeyey lacagaha ugu badan Lacagta loo qoondeyey
1. Wasaaradda Madaxtooyada 6.25%
2. Wasaaradda Maaliyadda 5.84%
3. Wasaaradda waxbarashada 4.7%
4. Wasaaradda Arrimaha Gudaha 4.3%
5. Wasaaradda Caafimaadka iyo Shaqada 2.98%
Waxaa kaloo miisaaniyadda 2008 ku jira hay’ado madaxbannan oo iyagana loo qoondeeyo lacago. Kuwaas oo kala ah:
Hay’adda Shaqaalaha Dawladda oo loo qoondeeyey 0.27%, Hay’adda NERAD oo loo qoondeeyey 0.14% , Hay’adda NDC oo loo qoondeeyey 0.14%, Hay’adda miino saarka Qaranka oo loo qoondeeyey 0.13% iyo Guddiyada kala ah:
Guddida Qandaraaska Qaranka oo loo qoondeeyey 0.13%, Guddida la dagaalanka AIDS-ka oo loo qoodeeyey 0.11%, iyo Guddida Doorashooyinka Qaranka oo loo qoondeeyey 2.0%.
Waxaa iyana ah qodob muhiim ah iyadoo sannadkan 2008 loo qoondeeyey mashaariic guud oo horumarineed dalka oo ku jirta miisaaniyadda taasoo dhan 5.55%, halka ay sannadkii 2007 ay ka hayd 4, 43 % iyo sannadkii 2006 oo ahayd 6.23%.
Milicsiga Miisaaniyadda 2008:
Kadib markii Guddidu Dhaqaaluhu dood dheer ka yeeshay istaraatijadda lagu duulayo miisaaniyadan sannadkan 2008. Haddaba Milicsi dheer ka dib waxa u caddaatay Guddida Dhaqaalaha in loo baahan yahay in miisaaniayadda sannadkan lagu muujiyo arrimahan soo socota:
1. Lacagta loo qoondeeyey doorashooyinka Golayaasha Degaanka iyo Madaxweynaha:
Waxa lagu muujiyey miisaaniyadda sannadkan lacag dhan 5,000,000,000 SLSH. Isla markaana waxa Wasaaradda Maaliyaddu noo xaqiijiyeen inay doorashooyinka u hayaan lacag kale oo dhan 8,000,000,000 SLSH ee ku jirtay miisaaniyaddii 2007. Markaas waxa Guddidu Dhaqaaluhu isla garteen inay lacagta dambe ay wasaaradda Maaliayadda u xaqiijiso Golaha iyadoo qoraal rasmiya ku keenaysa ama lifaaq la socda miisaaniyadda sannadkan 2008 si dadka reer Somaliland loogu xaqiijiyo inay doorashooyinkii dhacayaan.
2. Lacagta loo qoondeeyey ku beddelka lacagta giinbaarta magaalada Burco:
Iyadoo laga duulaayo sidii ay hore isla afgarteen Wasaaradda Maaliyadda iyo Guddida Dhaqaaluhu inay lacagta giinbaarta laga beddelo Gobolka Togdheer, gaar ahaan lacagaha 50-ka iyo 100-ka, ayaa waxa Guddidu soo bandhigtay in loo baahan yahay in lacagtan oo ku jirtay miisaaniyadda 2007 loo muujiyo oo lagu soo daro miisaaniyadda sannadkan 2008 si loo hubiyo in sannadkan laga beddelaayo lacagta giinbaarta magaalada Burco.
3. Lacagtii 2% ee taakulaynta Gobollada bariga Somaliland:
Lacagtan loogu talogalay taakulaynta Gobollada bariga ayaa iyana aan ka muuqan miisaaniyadda sannadkan 2008. Sidaa darteed, si looga hortago lunsiga lacagtan waa in ay ka soo gudbiyaan lifaaq miisaaniyaddeed oo kala ah hadhaagii sannadkii hore 2007 iyo ta sannadkan 2008.
4. Horumarinta kalluumaysiga ee xeebaha Somaliland:
Iyadoo laga duulaayo cunto yarida ku soo fool leh dalka, ayaa waxa lagama maarmaan noqotay in la dhiirrigeliyo horumarinta kalluumaysiga ee xeebaha Somaliland. Sidaas darteed, waxa loo baahan yahay in lacago gaar ah loo qoondeeyo horumarinta xeebaha gaar ahaan kuwa Gobolka Sanaag si loo abuuro ilo cusub oo kobciya dakhliga muwaadinka Somaliland.
Waxaana la isla gartay in la maalgeliyo xeebaha kala ah Xarshow, Maydh iyo Xiis. Isla markaana looga jari doona madaxa Gurmadka wixii loo qoondeeyey.
Kadib dood dheer iyo falanqayn Guddida Dhaqaaluhu waxay isla garteen ugu dambayntii in nuxurka miisaaniyadda 2008 aan wax-ka-beddel lagu samayn, isla markaana aan wax-ka-beddel lagu samayn wadarta guud ee miisaaniyadda sannadkan 2008 oo dhan 300,252,463,142 SLSH.
Kadib kulankii dambe ee lala galay Wasaaradda Maaliyadda ayaannu isla afgaranay in qodobaddii aan nu kor ku soo sheegnay la wada fuliyo. Waxaannu culayska ugu weyn saarnay doorashooyinka, diiwaangelinta, taakulayntiii gobollada bari iyo beddelka lacagta giinbaarta Burco.
Badheedhaha Guddida Dhaqaalaha:
Waxa Guddida Dhaqaaluhu u soo jeedinayaa Golaha Wakiillada Somaliland inay ansixiyaan miisaaniyadda Qaranka ee sannadkan 2008, iyagoo ka duulaya arrimaha soo socda:
Kadib markii Guddidu iyo Wasaaradda Maaliyaddu isla meel dhigeen oo ku muujiyeen lifaaq miisaaniyaddeed saddexda lacagood ee ugu muhiimsan waqtigan oo kala ah lacagta doorashooyinka, lacagta giinbaarta Burco iyo lacagtii taakulaynta gobollada bariga Somaliland.
Maadaama miisaaniyaddii sannadkan 2008 ay ka hadhay muddo aan ka badnayn lix bilood oo keliya.
Maadaama dalku marayo xaalad adag oo shaqo la’aan iyo sicirka cuntooyinka oo cirka isku shareeray, isla markaana duruuf adag ku haysa danyarta Somaliland iyo shaqaalaha dawladda oo markii horeba mushahaarooyinku ku yaraayeen.
Soo jeedimaha wax-ka-beddelka Miisaaniyadda soo socota (Future Budget Changes):
Si mustaqbalka dhow loo helo miisaaniyadda qaranka oo leh siyaasad cad, hufnaan iyo aragti laga duulo, kuna salaysan qaababka casriga ah ee waddamada soo koraya, ayaa waxa la isla gartay in lagu kordhiyo qodobaddan soo socda:
Xeerka Miisaaniyadda (Budget law) oo la dhammaystiro;
Xeerka Baanka (Bank Act) oo la dhammaystiro;
Xeerka Dekedda Berbera (Berbera Port Act) oo dib-u-eegis lagu sameeyo.
In dhammaan hay’adaha dawladda ee madaxbannaan sida Baanka, Wakaaladda Biyaha, Madbacadda Qaranka iwm ay soo bandhigaan sannadka dambe xisaab-xidhkooda iyo miisaaniyadooda.
Xeerka kala xaddaynta mushahaarooyinka golayaasha qaranka oo la dhammaystiro.”
This entry was posted in News and tagged miisaaniyadda, wakiilada. Bookmark the permalink.	Comments are closed.